Abashisi bensimbi engagqwali abigoqiwe abakhiqizi - China Cold iphuma insimbi engagqwali amashidi Factory, abahlinzeki
Ama-410 410s abandayo asongwe insimbi engagqwali amashidi (0.2mm-8mm)
410 insimbi engagqwali ishidi unamandla aphezulu futhi machinability omuhle. Kuzoqina ngemuva kokwelashwa kokushisa. Imvamisa isetshenziswa njengempahla eluhlaza yokusika amathuluzi kanye ne-tableware. Uma kuqhathaniswa nensimbi engagqwali engu-410, i-410S inokuqukethwe kwekhabhoni ephansi futhi inokumelana kangcono nokugqwala nokuqina.
316L316 Cold asongwe Engagqwali amashidi (0.2mm-8mm)
I-316L uhlobo lwensimbi engagqwali ye-molybdenum. Ngenxa yokuqukethwe kwe-molybdenum ngensimbi, ukusebenza okuphelele kwale nsimbi kungcono kunalokho kwensimbi engagqwali engu-310 no-304. Ngaphansi kwezimo zokushisa okuphezulu, lapho ukugxila kwe-sulfuric acid kungaphansi kuka-15% noma ngaphezulu kuka-85%, insimbi engagqwali engu-316L inebanga elibanzi. sebenzisa. Insimbi engagqwali ye-316L nayo inokumelana okuhle nokuhlaselwa kwe-chloride ngakho-ke isetshenziswa kakhulu ezindaweni zasolwandle. Insimbi engagqwali engu-316L inokuqukethwe okuphezulu kwekhabhoni okungu-0.03 futhi ingasetshenziswa kuzinhlelo zokusebenza lapho kungenziwa khona ukuthimisa futhi kudingeka ukumelana nokugqwala okuphezulu.